I-PIPA / SOPA: Okuqukethwe Kwamahhala Kungasibulala Kanjani | Martech Zone
NgoLwesithathu, Januwari 18, 2012 NgeSonto, Septhemba 30, 2012 Douglas Karr
Izinkampani eziningi zivala amasayithi azo ngemizamo yokulwa noMthetho Wokuvikela i-IP (PIPA) / SOPA obuyekezwayo lapha e-United States. Esikhundleni sokukhuphukela enqoleni bese ngivala isiza sami, ngicabange ukuthi kungakha kakhulu ukuhlanganyela nengiphendula ngakho.
Sinokuthunyelwe okungaphezulu kuka-2,500 kwebhulogi lokho khuthaza ubuchwepheshe obusiza ama-ejensi nabakhangisi emhlabeni wonke. Asikaze sikhokhise nganoma yikuphi okuqukethwe kwethu, futhi nathi besingayikhokhisi. Lapho sifakwa, sivame ukuthatha isikhathi sokubuyekeza umkhiqizo noma indaba - bese sithumela imininingwane mahhala. Sibe namanothi angakholeki avela ezinkampanini ezazithi yithi kuphela ibhulogi eliqaphelile futhi kwaholela ekuvezweni nasekukhuleni okukhulu kwamathuluzi azo.
Sisegameni lokuqala nabaningi ezimbonini zobuchwepheshe nezobudlelwano bomphakathi ngoba simagange ukusiza. Ngenkathi amanye amabhulogi ethanda ukuhlukanisa inkampani noma ubuchwepheshe, uzothola ukuthi okuthunyelwe kwethu kusekela kakhulu. Sifuna uphumelele. Sifuna uphumelele ngezixazululo. Sifuna ukuthola lezo zixazululo.
Ezinye izinkampani ziyasisekela ngoxhaso. Zoomerang (manje eyiSurveyMonkey) wayengumxhasi wethu wokuqala osemthethweni, a isoftware yamahhala yokuhlola online lokho kuthuthukise kakhulu ukubhala kwethu nokusebenzisana kwabafundi bethu. UDelivra kuyinto inkampani yezokumaketha nge-imeyili ohlinzeka ngokuqukethwe nocwaningo kubathengisi be-imeyili. Ngakwesokudla ku-Interactive ukuhola isixazululo sokumaketha okuzenzakalelayo osisizayo siqonde ukumaketha kwesikhathi sokuphila kwamakhasimende.
Ngabaxhasi bethu nabakhangisi, sikwazi ukubamba i- ukumaketha i-podcast, sakha incwadi yezindaba enkulu ye-imeyili, sesiqale ukuthuthukisa amavidiyo futhi siyaqhubeka nokuthuthukisa ulwazi lwesayithi lethu. Sine-a isicelo mobile khona lapha ekhoneni! Ama-webinar asohlwini lwethu olufushane futhi. Konke lokho kumahhala kuwe - abafundi bethu. Ngenkathi singenzi nzuzo kubhulogi ngqo, izimali zitshaliwe ukusiza wena. Vele, siyazuza ngokuba nebhulogi yokuqala ... kepha ngethemba ukuthi nawe uyakwenza.
Namuhla, besinomhlangano nabamele bethu bendawo e-Indiana ukuxoxa ngezinkinga zethu ne Vikela isenzo se-IP ne-SOPA. Ngenkathi abaholi bebephendula, azange basho ukuthi ummeleli wethu uyawusekela yini lo mthethosivivinywa. Nalu olunye ulwazi olwengeziwe - kepha ngicela ufunde amanothi ami ngezansi ngokukhathazeka kwami.
Ngokuqondene nabamele bethu, ukuvinjelwa kwe-DNS kudlulisiwe futhi kudinga umuntu wesithathu ukuthi anqume ukuthi angavimba isayithi noma cha. IVerbiage incike ohlangothini lokuthi amasayithi kuphela angavinjelwa amasayithi aphesheya. Angiyena ummeli, ngakho anginasiqiniseko sokuthi lokho kuyiqiniso noma cha.
Okungenzeka khona manjalo, ngaphandle kwenqubo efanele, ukuthi isiza esithathwa njengokuxhasa ukwephulwa kwelungelo lobunikazi singasuswa ezinjinini zokusesha kanye nazo zonke izindlela zemali engenayo yokukhangisa evinjiwe. Lokhu kungenzeka ngaphandle kwesaziso futhi ngaphandle kwekhono lesiza lokuzivikela. Ukuvakashelwa kwethu kwezinjini zokusesha kanye nemali yethu engenayo kungukuphila okuvumela le bhulogi ukuthi iqhubeke nokwanda. Ngamanye amagama, uma inkampani esindayo ngokomthetho onolwazi ofisa ukuya empini ngokuqukethwe esabelana ngakho… ibhulogi yethu ingaklinywa ize ife ngaphandle kokuthola usizo.
Ngiqinisekisiwe ocingweni ukuthi lokhu akunakwenzeka neze, ukuthi sizokwazi ukuthola ukumelwa futhi silwe nalolu daba. Nayi inkinga… ethatha isikhathi nemali engingenayo njengebhizinisi elincane. Ngakho-ke, kunokuba ngilwe, kungangcono ukuthi ngigoqe isiza ngibuyele emuva ngiyosebenzela inkampani enkulu. Kuyethusa lokho.
IWashington idolobha eligcwele abameli. Imvamisa abakhumbuli ukuthi labo bethu ngaphandle kwemithombo yezomthetho abakwazi ukuzivikela ngokwanele. Lokhu, ngombono wami, yilokho Izenzo Zokuvikela i-IP ne-SOPA zibhalelwe ukwenziwa. Ziyithuluzi lomkhakha ofayo… ukumangala kokugcina ukuzama ukuvimbela okungenakugwemeka. Ukufanisa engikunikeze kwakungumninisitolo owenqaba ukufaka izingidi emnyango wabo. Njengoba bengakwazi ukuthola ukuthi bangazivikela kanjani, manje bacela uhulumeni ukuthi abagade.
Angikubhali lokhu ngombono owodwa we-blogger. Sinikeza okuqukethwe futhi ngokulindela ukuthi ilungelo lethu lobunikazi lihlonishwe. Ngezinye izikhathi bekungekho futhi ngithathe isinyathelo. Ngikwazile ukuvimba amasayithi, ngawabika ezinhlelweni zokukhangisa, futhi nginezinye izinkampani - njengezinkampani ezithwebula izithombe - ngamaphakethe ajulile azilandelayo. Lokho kusho ukuthi u-ol 'Doug omncane ukwazile ukuvimbela ukwephulwa komthetho futhi alwe nakho ngaphandle kwesidingo sikahulumeni sokuzibandakanya. Vele, lokhu akumayelana nempahla yami yengqondo noma kunjalo - kumayelana nenzuzo ewohlokayo yemboni ye-movie nerekhodi.
Kubuhlungu. Futhi kuyishwa ukuthi abaholi bethu bezepolitiki empeleni bacabanga ngokwenza lokhu. Okudabukisa nakakhulu ukuthi a intando yeningi umholi, UChris Dodd, manje ungumholi walo mbutho ozochoboza isici esiyinhloko se-Intanethi - ikhono lokwabelana ngolwazi ngokukhululekile. Lo ngumthethosivivinywa ozoqhubeka nokufukula labo abanezikhwama ezijulile… futhi ususe ithuba kwabangenamandla. Izothinta wonke umsebenzisi oku-intanethi, kufaka phakathi nawe.
Sicela uthathe isikhathi sokufunda imininingwane emihle futhi uqonde ukuthi izokuthinta kanjani wena, okuqukethwe kwakho, nebhizinisi lakho. Awudingi ukuba owaseMelika, i-Intanethi ayinayo imingcele esingayifaka ku ... nalabo abangaphandle kwe-United States engcupheni enkulu kunathi. Funda kabanzi ku- Misa ukucwaninga kwaseMelika.
Jan 18, 2012 ku-2: 22 AM
Ukuphawula kwakho kokuthi “Esikhundleni sokulwa, kungangcono ukuthi ngigoqe isiza ngibuyele emuva ngiyosebenzela inkampani enkulu. Kuyethusa lokho. ”
Ngicabanga ukuthi ushaye isipikili ekhanda lapho.
Mhlawumbe nami ngiyabandlulula njengomnikazi webhizinisi elincane, kepha konke engikubona kosopolitiki kulo lonke leli bhodi kusikhuthaza ukuthi sithathe umsebenzi njenge-cog ohlelweni olukhulu. Kunokukhuthazwa okuncane kwabaseMelika ukuthi babuyele ezimpandeni zethu zebhizinisi futhi i- "American Dream" isiphendulwe yaba uhlobo oluthile lwephakeji "elifanele". Amabhizinisi amakhulu athola ukuhlenga ngenkathi amabhizinisi amancane kaningi engakwazi ukuthola imalimboleko kulezi zinsuku.
Konke lokho ukusho, iSOPA & PIPA Izenzo zibukeka zilungile ngokuhambisana nalokho. Ngithemba ukuthi bobabili bazodutshulwa ngokuphelele, kepha ukwazi abameli eWashington, lokhu ngeke kube kokugcina ukuzwa ngalolu hlobo lweZenzo.
Cindezela mfowethu, bese uqhubeka nokwenza lokhu okwenzayo.
Jan 18, 2012 ku-11: 41 AM
Ukuphawula kukaBrian kukhomba kokuthile ebekwenzeka kithi
Izwe iminyaka eminingi ye-150 edlule, leyo kube yimizamo enkulu
izinhlangano ezinjengohulumeni, ukulawula izimpilo zabathile
ongenakuzivikela. Uhulumeni wethu udale izinhlelo zomphakathi ezibalulekile
kususa noma yimuphi umqondo wesibopho somuntu siqu kanye nokugqugquzela kwangaphakathi
kubantu ababenza bathembele kakhulu ohlelweni olusabayo
ukungaphatheki kahle noma ukulimala kubagcina bengahambi (amasonto wethu angama-79 ubude
Uhlelo lomshuwalense wokungasebenzi luyisibonelo esihle). Uhulumeni wethu
kancane kepha ngokuqinisekile uthatha izinyathelo zokucima ezamabhizinisi ngu
ukuthatha imivuzo engayiphatha kubantu abathile (ngentela,
imithethonqubo, ubusoshiyali, nokuningi) nangokungavumi ukubona ukuthi kunjalo
enye yezinto ezimbalwa ezavumela iMelika ukuthi ikhule ibe ngumhlaba
amandla kusukela ekuqaleni kwayo kuze kube sekhulwini lama-20.
Izimpikiswano ezinhle, zenziwe kahle. I-SOPA kumele imiswe.
Ima kahle i- “SOPA”. Kungenza ngizibuze ukuthi ubani, yini futhi kungani lokhu kwenzeka - Ngubani ngempela osekela iSOPA?
Ngizonitshela izingane… kumayelana nento eyodwa “UKULAWULA”